JW Library: Hampiasa Mari-pitadidiana (Android) | JW.ORG Fanampiana
Manampy hanao hitadidy pejy amin’ny zavatra vakinao, ilay mari-pitadidiana ao amin’ny JW Library, hoatran’ilay tady kely ampiasainao mba hitadidiana pejy amin’ny boky. Misy mari-pitadidiana folo azonao ampiasaina isaky ny zavatra vakinao ao amin’ny JW Library.
Araho ireto toromarika ireo rehefa mampiasa mari-pitadidiana ianao:
Tsindrio ilay hoe Marque pages, raha te hitadidy lahatsoratra na toko ianao. Hisokatra avy eo ny lisitry ny mari-pitadidiana ho an’ilay zavatra vakinao. Fidio ny mari-pitadidiana mbola azo ampiasaina amin’ilay lahatsoratra na toko.
Raha te hitadidy fehintsoratra na andinin-teny ianao, dia tsindrio vetivety ilay fehintsoratra na andinin-teny. Tsindrio avy eo ilay sarina Marque pages misokatra eo amboniny.
Sokafy ilay zavatra nasianao mari-pitadidiana, raha tianao ny hijery mari-pitadidiana. Tsindrio ilay hoe Marques pages, avy eo ilay mari-pitadidiana tianao hojerena.
Raha te hanala mari-pitadidiana ianao, dia tsindrio ilay hoe Marque pages. Tsindrio ilay teboka telo eo amin’ny sisiny ankavanan’ilay mari-pitadidiana, ary avy eo ilay hoe Supprimer.
Raha te hamindra mari-pitadidiana ianao, dia tsindrio ilay hoe Marque pages. Tsindrio ilay teboka telo eo amin’ny sisiny ankavanan’ilay mari-pitadidiana, ary avy eo ilay hoe Remplacer. Mifindra mankeo amin’ilay toerana vaovao tianao hasiana azy ilay mari-pitadidiana. Tena hanampy anao izany hahita ny toerana farany novakinao ao amin’ny zavatra iray. Ho hitanao, ohatra, izay toko na andinin-teny novakinao farany rehefa mamaky Baiboly isan’andro ianao.
Tao amin’ilay JW Library 1.2 nivoaka tamin’ny Mey 2014 no nisy an’ireo zava-baovao ireo. Mandeha tsara amin’ny Android 2.3 na vao haingana izy ireo. Raha tsy mahita an’ireo zava-baovao ireo ianao, dia jereo ilay hoe “Mampiasà JW Library: Android”, ao amin’ilay hoe Fanavaozana farany.